नेपालमै जन्मियो यस्तो अ’चम्मको बच्चा, दुइटा खुट्टाको बिचमा मुटुजस्तै हेर्नुस डाक्टर समेत चकित, कसरि भयो यो अनौठो ?(भिडियो) – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/नेपालमै जन्मियो यस्तो अ’चम्मको बच्चा, दुइटा खुट्टाको बिचमा मुटुजस्तै हेर्नुस डाक्टर समेत चकित, कसरि भयो यो अनौठो ?(भिडियो)
काठमाडौ । चितवनमा फेरी अर्को घ’टना भएको छ । त्यहाँका एक दम्पत्तीले एक छोरीलाई जन्म दिए । तर बच्चा अनौठो जन्मियो । पुर्वी चितवन पर्सा भरतपुर नगरपालिकाकी महिलाले नर्मल रुपमा बच्चा जन्माएकी थिइन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
बच्चा जन्मिएपछि शिशुको श’रिरमा अनौठो ड’ल्लो थियो । दुई खुट्टाको बिचमा निकै ठुलो मा’सुको डल्लो रहेको देखिएपछि उनीहरुले शिशुलाई लिएर चितवनकै अस्पताल पुगे । त्यहाँको अस्पतालले उनीहरुलाई त्यो शिशुलाई काठमाडौ लिएर जानु ।
कान्ति बाल अस्पतालमा लिएर जान सुझाव दिएपछि काठमाडौ आएका छन् । तर उनीहरुको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएका कारण शिशुको उपचारमा कति पैसा लाग्छ भन्ने थाहा पाएनन् ।
शिशुको एमआरआइ गर्नुपर्ने सुझाव अस्पतालले दियो । तर एमआरआइ गर्ने स्थानमा जाँदा त्यहाँ २३ हजार रुपैया लाग्ने बताएपछि उनीहरु निकै आ’त्तिएका छन् । घरमा दुई छाक खाने अन्न पनि नभएका यि दम्पत्तीलाई उपचारमा यति धेरै ख’र्च लाग्ने थाहा पाएपछि चि’न्तित भएका छन् । हेर्नुहोस-
पहिलोपटक रमेश प्रसाईकी आमाले मिडियामा गरिन नयाँ खुलासा, यस्तो छ जिवन कहानी (भिडियो)